Guuxa Diyaarado aan la qoon heybtooda oo Cabsi geliyay Dadka G/Hiiraan – SBC
Guuxa Diyaarado aan la qoon heybtooda oo Cabsi geliyay Dadka G/Hiiraan
Posted by Webmaster on Aktoober 3, 2011 Comments
Sida ay ku waramayaan wararka aan ka heleyno ilo wareedyo la isku haleyn karo oo ku sugan gobolka Hiiraan, waxaa 2dii maalin ee ugu dambeysay siweyn looga dareemayay qeybo ka mid ah gobolkaasi guuxa diyaarado jooghoose ku duulaya oo aan heybtooda la aqoon.
Deegaanada sida aadka ah loogaga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah Maxaad, Buulo burte iyo deegaano kale oo hoosyimaada, mana la xaqiijin karo waxa ay yihiin diyaaradaasi iyo meesha laha leeyahay.
Dadka deegaanka ayaa ka muujiyay casi xoogleh guuxa diyaaradahan iyagoona noo xaqiijiyay in ay xiliyada qaar si aad ah ugu soo dhowaanayaan dhulka islamarkaana ay san ka seexan karin xiliyada habeenkii iyo xiliyada Casarkii ah oo ay u badanyihiin .
Sababaha ayaa ay dadka qaarkood isla dhexmarayaan in ay tahay in diyaaradahaasi ay sameynayaan saameyn ku aadan sidii ay weerar uga geysanlahaayeen gobolka halka qaarkoodna ay ku fasirayaan sababo la xiriira kulamo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi uga soconayay saraakiil sar sare oo ka tirsan xarakada Alshabaab Almujaahidiin.
Qeybo badan oo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa laga soo sheegayay todobaadkan gudihiisa in lagu arkay tiro badan oo ah diyaaradahan oo dul heehaabaya wada iyagoona aan ilaa iyo haatan la xaqiijin karin halka ay ka soo jeedaan iyo ujeedada ugu weyn ee ay u dul heehaabayaan hawada gobolada dalka qaar.
SBC International Garoowe .